एजेन्सी, ९ वैशाख । तपाई फोटोग्राफीको शौखिन हुनुहुन्छ भने बजारमा मिड प्रिमियम रेन्जको राम्रो क्यामेरा भएको स्मार्टफोनहरु उपलब्ध छन् ।
आज हामी तपाईलाई बजारमा उपलब्ध त्यस्ता केही स्मार्टफोनहरुका बारेमा बताउँदै छौं जसमा शानदार क्यामेरा फिचर र अन्य लेटेस्ट फिचरहरु पनि छन् ।
१. रियलमी सिक्स प्रो
६.६ इन्चको फूल एचडी प्लस क्यामेरा भएको यो फोन एकदमै राम्रो छ । यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्दा यसमा चारओटा रियर क्यामेराहरु छन् । यसमा एउटा लेन्स ६४ मेगापिक्सल्सको ५ भने दोस्रो ८ मेगापिक्सल्सको अल्ट्रा वाइड र तेस्रो २ मेगा पिक्सल्सको म्याक्रो र चौंथो ८ मेगापिक्सल्सको टेलिफोटो लेन्स छ । यसमा इन डिस्प्ले डुअल फ्रन्ट क्यामेरा छ । जसमा मेन क्यामेरा १६ मेगापिक्सल्स र अर्को ८ मेगापिक्सल्सको अल्ट्रा वाइड लेन्स रहेका छन् । यो फोनमा क्वालकम स्नापड्रागन ७२० जी प्रोसेसर रहेको छ । यसबाहेक यो फोनमा ४३०० एमएएचको ब्याट्री रहेको छ । यसमा डब्ली एटमसको सपोर्ट छ । यो स्मार्टफोनको सुरुवाती मूल्य १७ हजार ९९९ रुपैयाँ भारु छ ।
२. रेड्मी नोट नाइन प्रो
६.६७ इन्चको एचडी प्लस डिस्प्ले भएको यो फोनमा चारओटा रियर क्यामेरारहेका छन् । यसमा चारओटा रियर क्यामेरा रहेका छन् जसममा एउटा क्यामेरामा ४८ मेगापिक्सल्स, दोस्रोमा ८ मेगापिक्सल्सको अल्ट्रा वाइड लेन्स, तेस्रो ५ मेगापिक्सल्सको म्याक्रो लेन्स र चौंथो २ मेगापिक्सल्सको डेप्थ सेन्सर क्यामेरा रहेको छ । यो फोनमा १६ मेगापिक्सल्सको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ । यसमा क्वालकमको स्नापड्रागन ७२० जी प्रोसेसर रहेको छ । यो फोनमा गोरिल्ला ग्लास फाइभ प्रोटेक्सन पनि छ । यो फोनको सुरुवाती मूल्य १३ हजार ९९९ भारु रहेको छ ।
३. पोको एक्स २
६.७ इन्चको स्क्रिन भएको यो फोनको प्रोटेक्सनका लागि कर्निङ गोरिल्ला ग्लास फाइभ राखिएकोछ । यसबाहेक यो फोनमा क्वालकमको स्नापड्रागन ७३० राखएिको छ । यसमा एन्ड्रोइड १० ओपरेटिङ सिस्टम रहेको छ । क्यामेराको कुरा गर्दा यो फोनमा क्वाड रियर चारओटा क्यामेराको सेटअप छ । यसमा ६४ मेगापिक्सल्सको प्राइमेरी क्यामेरा रहेको छ । यस्तै ८ मेगापिक्सल्सको वाइड एंगल क्यामेरा र दुई दुई मेगापिक्सल्सको म्याक्रो लेन्स छ । यो फोनको फ्रन्ट क्यामेरामा २० मेगापिक्सल्स र २ मेगा पिक्सल्सको सेल्फी क्यामेरा रहेका छन् ।